Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha ee Kuleejka
Qorshaha Beesha Atlas
Aagga Koleejku wuxuu u arkaa magaalo kulleejo leh wadiiqooyin iyo adeegyo isku dhafan oo isku dhafan oo isku xidhan xaafadaha iyo Jaamacadda, korna u qaada bulshada.
Magaalada San Diego waxay biloowday dadaal wada shaqeyn ah oo lagu cusbooneysiinayo Qorshaha Beesha ee Kulliyadda, oo markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay 1989. Qorshayaasha beeshu waxay u yihiin "daabac buluug ah" horumarka bulshada iyo mustaqbalkeeda - waxay go'aamiyaan siyaasadaha iyo soo jeedimaha arrimo badan, oo ay ka mid yihiin guriyeyn, dhaqdhaqaaq, bannaan & jardiinooyin, tas-hiilaadka dadweynaha, dhowrista & joogtaynta, qaabeynta magaalooyinka iyo dhowrista taariikhiga ah. Qorshaha bulshada ee la cusbooneysiiyay wuxuu gacan ka geysan doonaa xoojinta doorka bulshada ee magaalo xero, soo nooleynta xarumaha waxqabadka muhiimka ah, bixinta fursadaha guryaha iyo fursadaha madadaalada, iyo xoojinta isku xirka ka dhexeeya SDSU iyo bulshada. Inta lagu jiro howsha cusbooneysiinta, shaqaalaha Waaxda Qorsheynta waxay la shaqeyn doonaan bulshada Aagga Kulliyadda iyo dadweynaha si loo aqoonsado loona tixgeliyo su'aalaha muhiimka ah, arrimaha, iyo fursadaha ay ka mid yihiin:
Sidee Aagga Kulliyadda u kori doonaa 20-30 sano ee soo socota?
Adeegyo noocee ah, kaabayaal dhaqaale ama tasiilaad ayaa loo baahan yahay si loo daboolo kobacaas?
Sidee beeshu sida ugufiican ugu qorsheyn kartaa fursado guri oo cusub, oo ay kujirto guryo ay dhigato ardayda San Diego State University?
Sidee Aagga Kulliyadda u kobcin karaa xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya San Diego State University isla markaana loo xoojiyaa xiriirka bulshada ee jaamacadda?
Sidee beeshu u taageeri kartaa ganacsiyada xaafadaha, oo ay ku jiraan kuwa ku yaal jidka ganacsiga bulshada ee El Cajon Boulevard?
Sidee beeshu u dhisi kartaa shabakada isku xirka tareenka adag ee Aaga Kulliyada, oo ay ku jiraan gawaarida iyo El Cajon Boulevard Bus Rapid Transit, si ay u taageeraan guryo dheeri ah oo u dhow taraafikada?
Xagee bay ka abuuri kartaa aaga kulleejooyinka caamka ah iyo kuwa madadaalada ee bixiya fursadaha banaanka, isku xirnaanta iyo ciyaarta?
Kaqeybgalka dadweynaha wuxuu muhiim u yahay qaabeynta bulshada. Kulamada joogtada ah ee lala yeesho Kooxda Qorsheynta Beesha ee Aagga Kulliyadda iyo Guddiga Cusboonaysiinta Qorshaha Bulshada, fursadaha kaqeybgalka dadweynaha waxaa lagu dari doonaa inta lagu jiro geedi socodka qorshaynta iyadoo loo marayo waxyaabaha soo socda:
Daabacaadda dukumiintiyada qorshaha
Kulamo iyo aqoon isweydaarsiyo
Baadhitaano on-line ah
Fursadda faallooyinka dadweynaha
Awoodda aad ku dalban karto bandhig kooxdaada ama ururkaaga
Awoodda lagu caawin karo ku faafinta ereyga baraha bulshada
Hoos ka eeg jadwalka habka cusboonaysiinta qorshaha; hoos ugu dhaadhaco oo iska qor liistada emaylka si aad u hesho cusboonaysiin muhiim ah oo ku saabsan Cusboonaysiinta Qorshaha Beesha ee Kuleejka.
Guddiga Cusboonaysiinta Qorshaha Beesha ee Aagga Kulliyadda
Guddiga Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha ee Aagga Kulliyadda waa guddiga la-talinta ee Guddiga Qorsheynta Beesha ee Aagga Kulliyadda, oo ah kooxda Muwaaddiniinta la aqoonsan yahay ee Kulliyadda. Gudigaan waxaa loo sameeyay si gaar ah Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha si loogu soo gudbiyo jawaab celin Magaalada inta howsha socoto.
Guddiga Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha ee Aagga Kulliyadda wuxuu qabtaa shirar joogto ah Arbacada saddexaad ee bil kasta 5:30 galabnimo ilaa 7:00 fiidnimo Kulamadani waxay fursad u siinayaan guud ahaan bulshada iyo daneeyayaasha kale inay talo ku soo gudbiyaan cusboonaysiinta Qorshaha Beesha. .
Fadlan halkan guji si aad u hesho dhammaan ajandayaasha, bandhigyada, iyo dukumiintiyada kale ee taageeraya ee Guddiga Cusboonaysiinta Qorshaha Beesha ee Kulliyadda ee Guddiga Qorsheynta Beesha ee Aagga Kulliyadda.
Qorshee Dukumiintiyada Cusbooneysiinta
Buug-yaraha Cusboonaysiinta Qorshaha Beesha ee Kuleejka
Buug-yaraha Cusboonaysiinta Qorshaha Bulshada wuxuu sharxayaa waxa uu yahay Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha iyo sababta loo cusbooneysiiyey Qorshaha Beesha ee Aagga Kooleejka.
Halkan guji si aad u aragto Buug-yaraha
DRAFT College Area Community Atlas: Warbixinta Xaaladaha jira
Xaaladaha jira Bulshooyinka Atlas waxay bixiyaan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan xaaladaha jira, fursadaha, iyo caqabadaha ku jira Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha ee Kulliyadda. Atlas wuxuu diiradda saarayaa ilaha juqraafiyeed, isbeddellada, iyo arrimaha muhiimka ah ee qaabeyn doona xulashooyinka horumarinta jireed ee muddada-dheer ee Aagga Kulliyadda. Atlas waxaa ku jira macluumaadka la xiriira tirakoobka dadka, isticmaalka dhulka, goobaha dhaqaalaha, qaab dhismeedka bulshada, dhaqdhaqaaqa, deegaanka dabiiciga ah iyo meelaha furan, iyo caafimaadka deegaanka iyo bulshada.
The Community Atlas waxaa loo isticmaali doonaa aasaas ahaan:
Fududeynta fikradaha bulshada ee arrimaha qorshaynta, mudnaanta, iyo himilooyinka mustaqbalka;
Qiimeynta arrimaha siyaasadeed iyo xulashooyinka, iyo diyaarinta adeegsiga dhulka kale iyo fikradaha gaadiidka;
Aqoonsiga fursadaha bulshada iyo caqabadaha jira; iyo
Dejinta siyaasado iyo ficillo fulin loogu talagalay qorshaha bulshada ee la cusbooneysiiyay.
Halkan guji si aad u aragto DRAFT College Area Community Atlas
Fadlan nala soo xiriir wixii su'aalo ah ee ku saabsan nidaamka ama sida aad uga qayb qaadan karto.
Magaalada San Diego, Waaxda Qorsheynta
Isku qor si aad u hesho cusbooneysiinta emaylka iyo ogeysiisyada kulanka dadweynaha.
Websaytka Cusbooneysiinta Qorshaha Beesha ee Kulliyadda waxaa loogu talagalay Qaybta 508 iyo Tilmaamaha Helitaanka Mawduucyada Websaydhka (WCAG 2.0) iyadoo maanka lagu hayo sidii looga dhigi lahaa waxyaabaha ku jira websaydhka dadka naafada ah (u hoggaansamida ADA).
1. Magaca agabka ama dukumintiga la codsaday
2. Qaabka aad doorbideyso (elektiroonig, daabacad weyn, iwm)
3. Magacaaga, lambarka taleefankaaga iyo cinwaanka emaylka si aan kuu helno.
2020 by Waaxda Qorsheynta Magaalada San Diego. Si sharaf leh loogu abuuray Wix.com